ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: ကိုဝင်းကိုလှိုင်ရေးတဲ့ အစုံပလုံ-၂
(၅-၁-၂၀၁၃) မြောက်ပိုင်း အမှန်တရား သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ........
မီဒီယာ လူငယ်လေးက မေးတယ်...ဒီမြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူသတ်မူ့အကြောင်းကို ယခုအချိန် ဖေါ်ထုက်နေကြတာ အခုလက်ရှိကျောင်းသား တော်လှန်ရေးကို မထိခိုက်ဘူးလါးဟုဆို၍၄င်း၊...နောက်တစ်ဦးမှ ယနေ့ကျောင်းသားတပ်မတော်ထဲမှာ လက်ရှိရာထူးကြီးနဲ့လုပ်နေတဲ့သူက ထိုမြောက်ပိုင်း လူသတ်စဉ်ကပါဝင်ခဲ့သောကြောင့် ဘယ်လို အဖြစ်မှန်ပေါ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါ့မလါးဟုမေး၍၄င်း၊........ရဲလင်းက ဒီအဖြစ်မှန် ရှင်းလင်းရေး အဖွဲ့ဝင် အားလုံး ကိုယ့်သမိုင်းကြောင်းလေးတွေ ပြောပေးဖို့ မေးတုန်းက မပြောဘဲထိုင်ရာက ထွက်သွားတဲ့ စမ်းချောင်း ဘိုဘိုက ရှေ့ဆက်တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲရေးမှာ ဒီအရိပ်မဲတွေရှိနေတဲ့ ဘယ်လိုနေရာ ခေါင်းဆောင်တဲ့သူတွေကိုမှ မပါဝင်လါနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီး အဖြစ်မှန်ကို ယခုအချိန်တွင် ဖော်ထုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒီမိုကရေစီနှင့်တရားမျှတမူ့အတွက် ဖြစ်သောကြောင့် ယခုကျောင်းသား တော်လှန်ရေးကို မထိခိုက်ကြောင်းဝင်၍ ရှင်းလင်းပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် မကြည်ပြာမှ မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသူတစ်ဦးအား အသတ်ခံရသောအချိန်တွင် တစ်ကိုယ်လုံးချွတ်၍ သတ်ဖြတ်မူ့အပေါ် နန်းအောင်ထွေးကြည်အား သက်သေရှိလါးမေးရာ အသံဖိုင်ရှိကြောင်းဖြေပါသည် ဖွင့်ပြနိုင်မလါးဟုမေးသောအခါ တရားရုံးကြမှဖွင့်ပြမယ်တဲ့ နောက်သက်သေ ၃ယောက်ရှိပါတယ်ဖြေပါသည် ဘယ်သူတွေလဲဟု မေးသောအခါ သူတို့အသက်အန္တာရာယ်ရှိနိုင်ပါသည် ဒါကြောင့်လျိုဝှက်ထားပါသည်တဲ့။ တော်ဝင်နှင်းဆီ အမှန်တရား သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြီးဆုံး၊..လဘ္ဘတ်ရည်သောက် မှုန့်စားပြီးပြန် ကျေးဇူးတင်ပါသည် ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေ အသတ်ခံရတာ ဘာတစ်ခုမှ အဖြေမရပါ။
— with UZa Wana and 60 others.
ဘရာဇီး ငှက်ရိုး and 18 others like this.
Swe Swe Win Han အသတ်ခံရတာ အဖြေရချင်ရင် သတ်တဲ့သူတွေကိုသွားမေးရမှာ မဟုတ်ဘူးလား
January5at 4:42pm via mobile · Like · 2
အင်ယု အင်ယု သိပ်လဲ မမေးကြပါနဲ.ဗျာ.. သူ.ခမျာ မေးသမားများပြီး အကြိမ်ကြိမ်ဖြေနေရလို. ဗျာ များပြီး ခေါင်းတွေလဲ မူးဝေနေလို. ဂယောင်ကတန်းတွေပြောနေရပါအုံးမယ်...
January5at 8:57pm · Like · 2
Skyheart Winko Swe Swe Win Han ...အသတ်ခံရတာ အဖြေရချင်ရင် သတ်တဲ့သူတွေကိုသွားမေးရမှာ မဟုတ်ဘူးလား.... တဲ့လေ..ပုံထဲမှာမေးနေပါတယ်..
အင်ယု အင်ယု... သိပ်လဲ မမေးကြပါနဲ.ဗျာ.. သူ.ခမျာ မေးသမားများပြီး အကြိမ်ကြိမ်ဖြေနေရလို. ဗျာ များပြီး ခေါင်းတွေလဲ မူးဝေနေလို. ဂယောင်ကတန်းတွေပြောနေရပါအုံးမယ်...
January6at 12:44am · Like · 1
Skyheart Winko ကဲ မပြောချင်လို့ကွာ....ကြာတယ် အဲဒီအချိန်တုန်းက အခု အဖြစ်မှန်ကိုဖော်မယ်ဆိုတဲ့ ကော်မတီတွေက AB မှာ ဘာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြတာဆိုတာ ဘယ်သူမှ မပြောကြသေးဘူးနော် အဲဒါကို အရင်ထုက်ပြန်ပေးပါ။
January6at 12:46am · Like · 2
Skyheart Winko ဘာမှန်းကိုမသိပါ၊ ဖွင့်မပြဘူး ညီလေးရယ် ငါတို့တောင်ကြောက်လါပြီ။.............
January6at 12:49am · Like · 2
Skyheart Winko တော်တော့ပေါ်ကုန်မယ်.....ရှုး............................................................................
January6at 12:54am · Like
Zaw Lin အသက်အန္တရယ်စိုးရိမ်ရတယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားမိလို့ပါ။ အေဘီပြန်မြောက်ပိုင်းပြန်များ အားလုံး အဖြစ်မှန်တွေရေး၊ စာအုပ်တွေထုတ်၊ မီဒီယာတွေနဲ့ဗျူး။ တွေ့ဆုံပွဲ တွေအကြိမ်ကြိမ်လုပ်၊ မြောက်ပိုင်းမှာ ကျဆုံးခဲ့သူတွေအတွက် အမှတ်တရ ကျောက်တိုင်ပြည်တွင်းမှာတောင် တရားဝင် တည်ခွင့်ရနေတာ။ ဒါဆိုရင် လုပ်ကြံမဲ့သူက ဘယ်သူဖြစ် နိုင်လဲ။ ကိုလဆိုင်း၊ ကိုကျော်ကျော် လက်ရှိ အေဘီမြောက်ပိုင်း၊ ကိုသံချောင်း သာယာဝတီထောင် ဆိုတော့။ ပြီး မခင်ချိုဦး အသက်ခံရတယ်ဆိုတာ အသံဖိုင် သက်သေရှိပါတယ်တဲ့။ အသံဖံ နိုင်တဲ့သူက ဘယ်သူလဲ။ အဲ့ဒိ အသံဖိုင်ကို ဘယ်သူ သိမ်းထား နိုင်လဲ။ ကျနော် လိုက်မမှီတော့ပါ။ လိုက်မှီသလောက် ကျနော်စဉ်းစားမိခြင်းသာ။
January6at 3:38am · Like · 5
Skyheart Winko ဆင်းရဲတဲ့ သူငယ်ချင်း၂ယောက် ကျောက်သွားတူးကြတယ် ၊ပြန်လါတော့ တစ်ယောက်ထဲ မပြန်လါတဲ့ မိသားစုကမေးတော့ တောကောင်ကိုက်သွားလို့ တောထဲမှာ သေသွားတယ်တဲ့ ဒါပေမဲ့ ပြန်လါတဲ့သူက တိုက်နဲ့ကားနဲ့လေ။ အဲဒီတောကောင်ကို တရားခံလိုက်ရှာနေတာလါး ရီစရာကြီးကွာ....
January6at 7:14am · Like · 2
Soe Linn အင်း...ရှင် နေ တဲ့...သူ တွေ... က...ပို အရေးကြီး တယ် လေ...ကိုယ့် ဘက် မျှား ဦး မလှည့် ဘို့...ပဲ လေ...ပွဲဆူ အောင် လုပ် ထား ပေး တဲ့...အာဂ ဖန်တီးရှင် တွေ က တော့...ဒူး နှံ ပြီး...ဘသား ယိမ်း လိုက် ညာ ယိမ်း လိုက်...အာဏာတွေ...ယစ် ခါ ခါ မူး နေ...
January6at 9:40am · Edited · Like · 4
Nyi Nyi Yu စစ်အစိုးရက သတ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေကိုတော့ မတောင်းဆိုကြတော့ဘူးနော်....AB လူသတ်မှုကိစ္စကိုကျတော့ အချင်းချင်းတွင်ကျယ် နေလိုက်ကြတာ....သက်သေခံတွေလဲ စုံလင်နေပြီဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ တရားမစွဲဆိုနိုင်သေးပဲ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကြီးပဲလုပ်နေရတာလဲ...သူတို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တခါလုပ်ရင် AB အတွက် သိက္ခာတခါကျရတယ်လေ....မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ ခံခဲ့ရတဲ့ ရဲဘော်တွေဘက်မှာတော့ အမြဲတမ်းရပ်တည်နေပြီးသားပါ။....
January6at 9:44am · Like · 3
Skyheart Winko ခင်ဗျားတို့မေးတဲ့မေးခွန်းထဲမှာ ABSDF(NB)နာမည်ဖြင့်၎င်း၊ အသက်ခံရတဲ့သူတွေကို ထောက်လှန်းရေးဖြစ်ကြောင်း၊မဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့အရာတွေက တော်တော်ဆိုးဝါးလွန်းတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်နေတယ် ABSDFအားလုံးစုက်ပြတ်သတ်သွားလိမ့်မယ်...ABSDF အဖွဲ့ရဲ့သမိုင်းတစ်ခုလုံးကို မထိခိုက်ဘူးလို့ပြောတဲ့သူ ဦးဏှောက်မရှိလို့ဘဲဖြစ်မယ်...အဲဒီတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီမည့်သူတွေကို မောင်းထုက်ပြီး ပြဿနာကို လျို့ဝှက်ထားသလိုဘဲ... Ko Oo ပြောသလို အမှန်တကယ်ဆိုရင် ပုခုန်းဖက်ပြီးဖြေရှင်းရမဲ့ကိစ္စတွေပါ၊
January6at 11:39pm · Edited · Like · 5
Johnny Lynn ဓါးခုတ်ရာလက်ဝင်လျှိုတဲ့သူများကတော့ ဘာမှမသိပဲစွာကျယ်နေကြတယ်၊ သိနေတဲ့သူတွေပြောတာနားထောင်ရတာကောင်းပေမဲ့ ၀င်းကိုလိုမိုးသီးဇွန်ရဲ့ လူမိုက်လိုလိုကောင်တွေကြောင့်ပိုပြီးသိက္ခာကျစရာဖြစ်လာတော့မယ်
January6at 10:02pm · Like
Aye Aye Soe Win နိုင်အောင်. မြွေပွေးတွေ စ လှုပ် ရှား လာပါပြီ။ နိုင်အောင်. ကို ကာ ကွယ်ကြ၊ အေဘီ ကို ကာ ကွယ် ကြ။ ဟားဟား
January6at 10:07pm · Like · 1
Johnny Lynn ကျနော်အမြင်ကတော့ နိုင်အောင်က နံပတ်တစ်တရားခံပဲ။ ကျန်တာတွေကနေက်ကလိုက်လာလိမ့်မယ်ထင်တယ်
January6at 10:29pm · Like · 1
Pho Pyone Cho ကျောင်းသားဟူသော အသုံးနှုန်း အစား အခြားအမည် ပြောင်းသုံးပါ ရန်
January6at 10:32pm via mobile · Like
Skyheart Winko Johnny Lynn ကျနော်အမြင်ကတော့ နိုင်အောင်က နံပတ်တစ်တရားခံပဲ။ ကျန်တာတွေကနေက်ကလိုက်လာလိမ့်မယ်ထင်တယ် တဲ့ မင်းပြောတယ်နော် မင်းဆရာက်ို........
January6at 10:34pm · Like
Johnny Lynn ဟားဟား..ငါ့ဆရာဆိုလိုကြားလိုက်ပါတယ်၊နားကြားလွဲနေလို့လားမသိဘူး၊ထပ်ပြောမယ်၊ နိုင်အောင်ကနံပတ်တစ်တရားခံ၊နောက် ရော်နယ်အောင်နိုင်၊လှဌေး၊ကျော်ကျော်(ကချင်)၊ကျော်ကျော်(ကရင်)၊အောင်ထူး၊မြောက်ပိုင်းဗဟိုကော်မီအားလုံးဟာ အဓိကတရားခံပဲ၊ အေးငါကစေတနဲ့ဝင်တည့်ပေးတာ၊ တစ်ဖက်သတ်လိုဖြစ်နေလို့မကောင်းဘူး၊
January6at 10:39pm · Like · 3
Johnny Lynn "အားလုံးသတိထားကြ..၀င်းကိုအကောက်ဟာ မြန်မာပြည်ထဲက၀င်းကိုသုံးနေတာမဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံခြားကတစ်ယောက်ယောက်သုံးနေတာဖြစ်မယ်၊ မြန်မာပြည်ထဲကလူတွေ အင်တာနက်ကိုတစ်ချိန်လုံးဖွင့်ထားပြီးမသုံးနိုင်ဘူး၊နှေးလည်းနှေးတယ်၊ အခုဝင်ကိုအကောက်က နေ့တိုင်းလိုလိုမကြာခဏာတွေ့နေရတယ်၊ ကျနော်သတိထားမိတာပြောတာနော်၊ ဘယ်သူသုံးနေသလည်းဆိုတာခန့်မှန်းကြည့်လိုရတယ်"
January6at 10:39pm · Like · 2
Johnny Lynn အပေါ်ကကျနော်ရေးတာကိုမဖျက်ပါနဲ့ဗျာ.ထားလိုက်ပါ..
January6at 10:41pm · Like
Aye Aye Soe Win ဆယ်ပြားကျော် ကျော် လည်း ထိပ်ဆုံး ကပါပါ တယ်။ မီမီ ခိုင် ကိစ္စ၊ ခြစားတာလည်းသူက ဝေစု ကို နိုင်အောင်ပြီး ရင် အကြီး ကြီး ရ တာပါ။
January6at 11:13pm · Like · 3
Aye Aye Soe Win ၁၉၉၂ ခင်ညွန်. သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ မှာ--အဲဒီတုန်းကတော့ဒေါက်တာနိုင်အောင်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကျနော်မတွေ့ဘူး==စစ်အစိုး၇ က သူလုပ်ရမဲ. အလုပ် လုပ်ပေးသွားတဲ.သူတွေ ကို ကျေးဇူး ဆပ်တဲ. အနေနဲ. ခု ၂၀၁၃ မှာ ပြန် သူကောင်းစန်းတင် ပေး နေရာပေး ပြုပေးနေတယ်ထင်ပါတယ်။ ဗို ခင်ညွန်.. လက်ထက် မှာ--ကာ ဗာ ပြုတ် သွား လို.--ပြည်သူ.ဘက်က လက်ချက်နဲ.သေခဲ. တဲ. စစ်ထောက်လှမ်းရေး အမာ ခံ များ--မောင်းတော ဘက်မှာ တစ်ကြိမ်ဖြစ်ဘူးတယ်။ လွန်ခဲ.တဲ. နှစ် ၂၅ အတွင်း ခင်ညါန်. သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ မှာ တာ ၀န် ယူ ပေပါ ၀ါ.က် လုပ်ပေးရတဲ. ကီး ၀က်စ် ဆင်း ဗိုလ် မှုး ကြီးဟောင်း အငြိမ်းစား တစ်ဦး က အတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ ပြော ချင်တာ က၊ အစိုး ရ အလို ကျ ဘယ်သူတွေ အလုပ် လုပ်ပေးခဲ. လဲ။ ဒီ လူတွေ လွတ်နေသေးတယ်။ ဇော် ဦး ဆို အချောင်သမားက တိုင် တဲလ် ထက်-စကထဲ က အစိုး ရ လူပါ။ ကာဗာ ပြုတ်သွား လို. ထောက်လှန်းရေး အစစ် အသတ်ခံရတာ မောင်းတော ဘက်မှာ ပဲ ရှိတယ် တဲ.။ ဒီတော.- စဉ်းစားကြပါ။
January7at 6:02am · Edited · Like · 3
Skyheart Winko Johnny Lynn ဟားဟား..ငါ့ဆရာဆိုလိုကြားလိုက်ပါတယ်၊နားကြားလွဲနေလို့လားမသိဘူး၊ထပ်ပြောမယ်၊ နိုင်အောင်ကနံပတ်တစ်တရားခံ၊နောက် ရော်နယ်အောင်နိုင်၊လှဌေး၊ကျော်ကျော်(ကချင်)၊ကျော်ကျော်(ကရင်)၊အောင်ထူး၊မြောက်ပိုင်းဗဟိုကော်မီအားလုံးဟာ အဓိကတရားခံပဲ၊ အေးငါကစေတနဲ့ဝင်တည့်ပေးတာ၊ တစ်ဖက်သတ်လိုဖြစ်နေလို့မကောင်းဘူး၊
about an hour ago · Unlike · 1 (ကဲ ... အားလုံးအဖြေရပြီနော်)ဂျပန်စစ်ကြောရေး ကျောင်းဆင်း ၀င်းကို
January6at 11:42pm · Like · 1
Skyheart Winko ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကို ဂျေ အလ်
January6at 11:43pm · Like
Aye Aye Soe Win ကျောင်းသားတွေကို ရက်ရက်စက်စက် ခုတ်ထစ်ခဲ.တဲ. လှ ဆိုင် လဲ ပါပါ တယ်။
January6at 11:44pm · Like · 1
Shwelatyar Daw ကိုဂျော်နီလင်းအနေနဲ့ ပို့စ် သပ်သပ်ရေးပြီးဆွေးနွေးနိုင်ပါသလား။ ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
January7at 12:42am · Like · 1
Htet Aung comment တွေဖတ်လို့ကောင်းတယ်...။ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက် အားရစရာပဲ ...။
January7at 4:49am · Like · 1
Aye Aye Soe Win ခင်ချိုဦး ကို သတ် ပုံ သတ်နည်း နဲ. ပတ်သက်ပြီး၊ မေးတဲ.မေးခွန်း အပေါ်--နန်းအောင် ထွေးကြည် တရားဝင်ဖြေကြားမှာ ကို သိချင် လှပါတယ်။ ၁--အောင်မိုး ၀င်း စီးရီး ထဲ က အတိုင်းလား(အောင်မိုးဝင်း ရေးတာ ကို တစ်ယောက် ယောက် က ပြင် ဆင်ချက် ပေးပါလို. ဆို ရင် ဘာ ကြောင်. ပြင် ဆင်ချက် လိုတာလဲ။ )
January7at 5:48am · Edited · Like · 2
Aye Aye Soe Win ၂--မဟုတ်ဘူး။ အဲ သလို အသတ် မခံ ရဘူး ဆို ရင် အမှန် တရား ချစ် လှ ပါတယ် ဆိုတဲ. သူတွေ တခုခု ထွက် ပြောသင်. တယ်၊ ခုတော.-- ခု ထိ လှို. ၀ှက် ရမယ် တဲ.။ ( ခင် ရွှေ လှို င် က --အာအက်ဖ် အေ အင် တာ ဗျူး ပါ အချို. အချက် တွေ ဟာ ပြော သူ မှား ပါတယ် လို. ထောက် ပြထားတယ်) တိုက် ကြည်. နိုင် ကြဖို.။
January7at 5:54am · Edited · Like · 3
Aye Aye Soe Win ၃-- ဇန် န၀ါရီ ၅ ရက် နေ. သတင်းစာ ရှင်း လင်း ပွဲ မှာ--ဒီ မေး ခွန်း ကို ပဲ ထပ်မေးကြတော.×× စာပါ အကြောင်း အရာ တွေ အတိုင်း ခင်ချိုဦး အသတ် ခံ ရ တဲ. ပုစံ မှာ၊ ပြောထားပြီး သား အတိုင်း မျက်မြင် ၃ ယောက် ရှိပြီး သူတို. အသံဖိုင်တွေ ရှိတယ် တဲ.။ ဒီ တော.--တချိန် က မှား နေတယ် လွဲ နေတယ် လို.ပြောပြီး ပြင် ဆင် ချက် တောင်းခဲ.သူ ကိုယ် တိုင် ပဲ၊ ခု- ၅ ရက် နေ. မှာ စာ ပါ အချက် အလက် အတိုင်း ထပ် အတည် ပြုပေးထားပါတယ်။
January7at 5:51am · Edited · Like · 3
Aye Aye Soe Win ၄--ဘာတေး ဆောင်းပါး မှာ လည်း ခင်ချိုဦး နောက် ဆုံး ခန်း၊ အနှိပ်စက်ခံ ရပုံကို အကြမ်းဖျင်း ထပ်ရေးသားထားပါတယ်။ ဘာ တေး က တော. မမှား နိုင် ပါဘူး။ သူတို. မြောက် ပို င်း ပြန်တွေ ပြော စကား အတိုင်းသာ၊ ဘာတေး ရေး ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဘာတေး မဂ္ဂဇင်း ထွက်လာ မှ ဘာတေး ကို တစ်ယောက် ယောက် က အမှား ပြင် ဆင် ချက် ဆိုပြီး မက်ဆော.ခ်ျလှမ်းပို. ပြင်ခိုင်းတာ ရှိခဲ. လျှင်၊ ဘာ လို. ရှေ. တမျိုး နောက် တမျိုးတွေ ဖြစ်နေကြတာလည်း။ လူတကာလည်းသိနေပြီ။ တရား ခံတွေ လို. သတ်မှတ်ထား ခံရတဲ. သူတွေ လည်း ရှိပြီ။ အသံမစဲ ပြောဆိုနေတဲ.သူတွေ ၏ နှုတ်ထွက်စကား၊ ရေးသား တင် ပြမှု တွေ လည်း အပုံအပင် ရှိနေပြီ။ ဘာကြောင်. ဘာကြောင်.--ရှေ.နောက် မညီ ညါတ်မှုတွေ ဖြစ်နေသေးတာလည်း။
January7at 5:53am · Like · 3
Johnny Lynn အခုပဲမဲဆောက်ညဈေးကပြန်လာတယ်၊အရင်တွေ့နေကျလူတွေသိပ်မတွေ့ရတော့ဘူး၊မြန်မာပြည်ပြန်သွားကြလို့နဲ့တူပါတယ်၊ နိုင်အောင်ကဦးအောင်မင်းနဲ့ညှိပြီးအလင်းထဲကိုဝင်ဘို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ငါတို့ကေအင်ယူအထောက်တော်ဆီကသတင်းရတယ်၊ အောင်မင်းတို့သူနိုင်အောင်တို့ NGO တော်တော်များများနဲ့ချိတ်ပေးနိုင်မယ်လို့အထင်ကြီးနေတယ်၊ ကိုမိုးသီးကဘာအရည်အချင်းမှမရှိဘူးလို့ အောင်မင်းတို့ကထင်နေတယ်၊ စားဖါးခြင်းပေါင်းသွားတဲ့သဘောပဲ
January7at 6:14am · Like · 1
Johnny Lynn ခင်ညွန်. သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ မှာ နိုင်အောင်မပါဘူးလို့ပြောမှာပေါ့..သူ့လူဖြစ်ဖို့များနေတယ်လေ..စဉ်းစားကြည့်လေ
January7at 6:18am · Like · 1
Aye Aye Soe Win စက်တင်ဘာ တုန်းက တော. နိုင်အောင် ဟာ ခိုးကြောင် ခိုး ၀ှက် နဲ. ပြန်ရတာပါ။ အောင်မင်း က ပဲ သူ. ကို ကုန်းလမ်း နဲ. ပြန်ခိုင်း လိုက်ပါတယ်။ အာမမခံနိုင် လို. ပါ။ ဒီ တစ်ခေါက်က တော.- မသိဘူး။ မြောက်ပိုင်း ပြန်တွေကို အစိုး ရ က အေး ယဉ်ကျူး ခွင်. နဲ. လူ လုံး ပြ ခွင်.ပဲ ပေးထားတာမို.၊ တဖက် ကလည်း သူတို. လို ချင် တာ ရ။ ဟို တဖက် ကလဲ နိုင်အောင် အစိုး ရလူ ဖြစ်နေလို. လုပ် မရဘူး ဆိုတဲ.ဆင်ခြေနဲ.။ ရှောင်နေကြတာပါ။ မြောက်ပိုင်းပြန်တွေက သူတို. ရည်မှန်းချက် ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း လုပ် ပြ ချပြ ဖို.ထက်၊ သူတို. လုပ်နေတာ တွေ ကြောင်.။ နောက် ဆုံး လူ ဆိုး ကို လည်း မရ။ အဖွဲ. အစည်း ပဲ သိက္ခာကျ၊ ဟို သတင်းထောက်မ ရေးသား နေတာ တွေ အပေါ်လည်း သ့သယ ရှိတယ်။ ရေးသား မှု တွေ မှာ၊ ဖေါက် ထွင်း သုံးသပ်မှု မပါ၊ လူတွေ နဲ. အဖွဲ. ၏ ဆိုက်ကော လော် ဂျီ ကို နား မလည်ပဲ စောင် ရေ များများ ရောင်း ရ အောင် သတင်း မဟုတ်တာ ကို သတင်း လုပ်နေသလိုပဲ။
January7at 10:07am · Edited · Like · 1
Aye Aye Soe Win အစိုး ရ ကြောင်. ဒိကောင်တွေ ရောင်.တက်နေတာ မှန် ရင်၊ အစိုး ရကြောင်. ရသင်.ရထိုက်တဲ. တရား ခံ ကို မရသေး ဘူး ဆို ရင်၊ ဘာကြောင်. ဘာကြောင်.---အစိုး ရကို မဖီဆန်ရဲ တဲ. မီ ဒီ ယာအတုတွေ နဲ. ပူးပေါင်းပြီး အသားမပါတဲ.အလုပ်တွေလုပ်နေကြတာလဲ။ နိုင်အောင် ကို ခေါ်လာတဲ. ၀န်ကြီး ၏ ရုံးရှေ.မှာ သွား ဆန္ဒပြလိုက်ပါလား။
January7at 6:28am · Like · 2
Aye Aye Soe Win တရားစီရင် မှု တစ်ရပ် ဖြစ်လာ အောင် လုပ်တဲ. အခါ လူသိ မခံပဲ လုပ်လို. ရတာတွေ ရှိတယ်။ အစိုး ရ က လုပ်ခွင်. မပေးဘူး ဆိုမှ--ဆူဆူညံညံ ပီအာတွေ လုပ်ကြရုံပဲ။ ခုတော. ခုတော.---သက်သေခံ အထောက် အထား တွေ ကို စုဆောင်း အသံသွင်း အထူး လှို. ၀ှက် လုပ်နေတဲ.--ကာလ အတွင်းမှာပဲ။ တာဝန် ရှိတဲ. နိုင်အောင် က လွတ် နေပြီ။ ပူးပေါင်း ကြံစည်မှုတွေ အများ ကြီး ရှိတယ်။ အပေးအယူ လုပ်တဲ.နေရာ မှာ မြောက် ပိုင်း က သူ အချို. ( အကုန်လို. မပြော ပါ) လည်း ကျိန်းသေပေါက် ပါတယ်။ လာငြင်း နိုင်ပါတယ်။
January7at 6:35am · Like · 2
Skyheart Winko မန်းသားတွေ ရိုးသားပါတယ် သူငယ်ချင်းတွေပါ။ သူများတွေအသုံးချလို့ များမကြာခင် အခြင်းခြင်း တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်လက်ညှိးထိုးတော့မှာမြင်လို့ အေးအေးနေ ၀ိုင်းလုပ်ပါ့မယ်ပြောလဲ မင်းတို့ဝေးဝေးနေကြ မြောက်ပိုင်းကော်မတီကွ ဆိုပြီး ဟော့ရှော့တွေလုပ်နေကြတယ် အေး ဆက်လုပ်ြ...See More
January7at 10:41am · Like · 1
Skyheart Winko ငါတို့အခုပြောနေတာ ABSDF သမိုင်းလေး သေသွားတဲ့ ရဲဘော်တွေ လှဖို့ပါ ငါတို့ဘာမှ မရနိုင်ပါဘူး။ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4659753865645&set=a.4659737545237.2168690.1647381844&type=1&theater&notif_t=photo_comment_tagged
January7at 10:53am · Edited · Like · 1
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 12:08 AM